Home Wararka Olole ka dhan ah MW Lafta Gareen oo si xoowli ah uga...
Olole ka dhan ah MW Lafta Gareen oo si xoowli ah uga socda Magalaada Nairobi
Wararka naga soo gaaraya magaalaada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in uu halkaas uu ka socdo olole looga soo horjeedo Madaxweyne Cabdicasis Lafta Gareen, kaas oo uu hogaanka u hayo Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xasan Shiikh Aadan.
Sharif Xasan oo kulamo gaar gaar ah la qaatay qaar kamida ganacsato ka soo jeeda beelaha Murusade iyo Liisaan ayaa ka codsaday in ay dhaqaale ku taakuleeyaan dhaqdhaqaaqa la doonayo in si fudud kurusiga looga tuuro Madaxweyne Lafta Gareen.
Sida MOL loo xaqiiyay dhaqalaaha lagu qabtay shirkii looga soo horjeeyay Lafta Gareen ee ka dhacay shalay Muqdisho uu si toos ah u bixiyay Xasan Cali Kheyre iyada oo lacagtaas la mariyay gacansato ku dhaqan magalaada Muqdisho. Xasan Kheyre ayaa dhankiisa waxa uu wadahadal kula jiraa Lafta Gareen isaga oo iska bari yeelayo hoowsha uu hogaanka u hayo Sharif Xasan.
Dhanka kale, waaa isna qayb weyn ku lahaa da’daalada la doonayo in qal-qal siyaasadeed la galiyo Madaxweyne Lafta Garee, Musharax Cabdirahman Cabdishakur oo rumeysan in inta aan la gaarain doorashada marka hore laga taqaluso ama ciriiri siyaasaadeed la galiyo madaxweyne Lafta Gareen.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Kheyre ayaa dhankooda rumeysan in Lafta Gareen uu u shaqeeynayo Farmaajo, hadii uu sii joogana ay keeni karto in Farmaajo halkaas ka helo xildhibaano fara badan. Dhanka kale Xasan Kheyre ayaa og in Farmaajo uusan marnaba ogolaan doonin in Kheyre xildhibaan ka helo Koonfur Galbeed.
Sida MOL loo xaqiijiyay waxa magaalooyinka ay ku nool yihiin shacabka reer Koonfur Galbeed ee caalamka lagu qaban doono mudaharaadyo , waxaa taa barbar socon doona dagaal qorsheeysan oo looga qaadi doono MW Lafta Gareen dhanka Social Media.